Latest - Nepal Aawaaj
Moon Sampang Rai — March 2, 2021 add comment
चोखो मनले एक लाईक गरि सेयर गर्नुहोस भगवान छ्न ! एक बाबाले खोले मुक्तिनाथ मन्दिरको रहस्य ! १०८ धारा नै किन ? मुस्ताङको मुक्तिनाथ (३८०० मिटर) मन्दिर पवित्र थलो हो हिन्दु र...	Read more »
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरूले अवकाश पाएका छन् । बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ दुबैले आजै (मंगलबार) बाट अवकाश पाएका हुन् । सिवाकोटी २०४४ साल र श्रेष्ठ...	Read more »
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई रहेका छन् । मंगलबार...	Read more »
प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह पनि सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएको छ । सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरेसँगै...	Read more »
तपाईलाई बाइक चला’उन आउछ ? वा तपाईको परिबारमा कुनै १ जनालाई त अबश्य बाइक चलाउन आउछ होला नी ? हैन र ? हो आज हामी यसैबारे अचम्म’को कुरा गर्दैछौ । कुरा हो...	Read more »
ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिका—३ तथा जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजार दोभान बजार’मा आगलागी भइरहेको छ। आज बिहान १० बजे भोला पौडेलका घरबाट विद्युत् चुहिएर आ’गलागी भ’एको स्थानीयवासी गणेश कार्कीले बताए। दोभान बजारमा अहिले ३५...	Read more »
ताप्लेजुङ, फागुन १८ गते । ताप्लेजुङको दोश्रो ठुलो बजार दोभानमा आगलागी भएको छ । मेरिङदेन गाउँपालिका ३ खाम्लुङमा विहान ९ बजेदेखि आगलागी सुरु भएको स्थानीय दिपेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार...	Read more »
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत २ सय ५८ जना बेरोजगार यूवाले रोजगारी पाए
धनकुटा,फागुन १७ । धनकुटाको सहिदभुमि गाँउपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत चालुआर्थिक वर्ष २ सय ५८ जना बेरोजगार यूवाले रोजगारी पाएका छन् । उनिहरुले यस पटक १ करोड ३३ लाख ३९ हजार बराबरको...	Read more »
प्रधानअध्यापकको अनौठो धन्दा ! जुन सुन्दा सबै चकित
काठमाडौ । विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षा आर्जन गर्न जान्छन् । तर पोखरामा यस्तो विद्यालय छ जहाँका प्रधानअध्यापकले विद्यार्थीलाई मल बोकाउँछन् । बाख्राको खोरमा समेत सुताउँछन् । स्थानिय भूमि आधारभूत विद्यालयका प्रधानअध्यापकले यस्तो गर्ने...	Read more »
वास्तुशास्त्र अनुसार जसले यी उपाय अनुसार घरमा लक्ष्मी भित्र्याउँछन् उनिहरुकाे खुल्नेछ समृद्धिको बाटो, एक पटक अवश्य पढ्नुहाेला । शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि वास्तुशास्त्रमा अनेकौं उपाय सुझाइएका छन् । यीमध्ये यहाँ...	Read more »